Doogee Shoot 2, fiheverana voalohany ao amin'ny MWC 2017 | Androidsis
Doogee Shoot 2, fahatsapana voalohany
Alfonso de Frutos | | MWC, About us
Doogee miloka amin'ny fanolorana fitaovana hafa amin'ny vidin'ny knockdown. Ohatra iray ny Doogee Y6 Max 3D, telefaona liana be izay efa nosedraina tao amin'ny MWC. Ankehitriny dia anjaran'ny Doogee mitifitra 2, finday fakan-tsary indroa faran'izay mora indrindra eny an-tsena. Ary izany ve 70 euro fotsiny ny vidiny.
Tsy azontsika atao ny tsy mahita ilay fotoana hanandramana ny Doogee Shoot 2 ao amin'ny MWC 2017 noho izany dia nanantona ny trano fonenan'ireo mpanamboatra izahay hijery ny fomba fihetsik'ity telefaona ity. Ary raha dinihina ny vidiny, dia tsy ratsy mihintsy.
Ity no Doogee Shoot 2
Miatrika telefaona iray misy vatana vita amin'ny plastika izahay. Tsarovy fa finday finday tena mora vidy izy io, ka tsy afaka mangataka zavatra be loatra amin'izany isika. Na izany na tsy izany dia lazao marina ny fanamboarana ary mipetraka tsara eo an-tànany ny Doogee Shoot 2.
Misy pitsopitsony izay nanaitra ahy be dia be. Ary ny zava-misy fa ny Doogee Shoot 2 manana ny seranan-tsambo miorina eo an-tampony, eo akaikin'ny output audio 3.5mm. Toe-javatra mahaliana iray hametrahana ny port USB micro, saingy heveriko fa ny ekipa mpamolavola dia nametraka azy io noho ny antony sasany.
Telefaona mora ampiasaina izy io; fantsika amin'ny mirefy 142.6 x 72.6 x 9.5 mm ary milanja 174 grama, ny Doogee Shoot 2 dia azo ampiasaina amin'ny tanana milamina. Lojika ampahany amin'ny fandinihana ny efijery 5-inch misy ny vahaolana HD.
Tsy azontsika atao ny mangataka fitaovana matanjaka be loatra, fa ny quad core processeur izay mahatratra ny hafainganan'ny famantaranandro hatramin'ny 1.5 GHz miaraka Fahatsiarovana RAM 1 GB hamela anao hilalao lalao izay tsy mitaky enta-mavesatra be izany
ny Fitaovana anatiny 8 GB Toa rariny izy ireo, saingy azontsika atao ny manitatra ny fahatsiarovana amin'ny alàlan'ny slot karatra micro SD. Hatreto dia ny normal rehetra amin'ny finday avo lenta. Fa andao hiroso amin'ny antsipiriany mahaliana indrindra amin'ny Doogee Shoot 2.
Hanombohana azy dia manana a mpamaky ny rantsantanana eo anoloana, antsipiriany mandinika ny vidiny. Avy eo dia ao ny azy baterian'ny 3.360 Mah, izay mampanantena fahaleovan-tena lehibe raha manisa ny lanjan'ireo fitaovana entin'ity finday ity isika. Tombanako fa ny Doogee Shoot 2 dia haharitra iray andro sy sasany tsy misy olana, na dia tsy maintsy hofakafakaina kokoa aza rehefa tonga ny sampana fitsapana hanamarina izany.
Ny hery lehibe hafa dia miaraka amin'ny fakantsariny. Sa ny azy rafitra efitrano roa. Ary izany ve ny telefaona roa sensor 5 megapixel izay, noho ny haitao novolavolain'i DOOGEE miaraka amin'i Huawei, dia mamela ny fakana sary misy vokany bokeh, miaraka amina kalitao tsy mitombina.
Afaka nanandrana ny fakan-tsary kely teo amin'ny toerako aho ary gaga tamin'ny valiny. Tsy dia tsara izany, fa ho an'ny 70 euro dia tena tsara ity fakantsary ity. Raha fintinina dia toa telefaona mety ho an'ny olona te hanomboka eo amin'ny tontolon'ny Android izy nefa tsy mandany vola be. SY ny zava-misy mahavita maka sary misy effets bokeh, na tsy mifantoka intsony, dia plus tokony ho raisina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » MWC » Doogee Shoot 2, fahatsapana voalohany
PiTTDRoiD dia hoy izy:
Nanaraka ny fizotry ny varotra hatramin'ny voalohany aho ary mbola tsy niasa ... tsy afaka mividy ny terminal ianao amin'ny vidiny voalaza ... 10:00 dia 11:00 maraina any Espana ... ary raha miditra amin'ny tranonkala ianao amin'ny tamin'io fotoana io ... Na voasakana io na tsy nipoitra ny rohy ... ary raha miseho ilay rohy dia mitondra antsika any amin'ireo fivarotana varotra ... ary tsy misy amin'izy ireo manana ilay fitaovana amin'ny vidiny natolotry ny tolotra ofisialy ..
Valiny amin'i PiTTDRoiD
Ny fiakaran'ny finday avo lenta miaraka amin'ny efijery AMOLED dia mitohy manimba ny LCD
InnJoo dia manolotra ny vokatra vaovao ao amin'ny MWC 2017